Omnisend: Anyore-kushandisa-Platform yeEcommerce Email & SMS Kushambadzira Kushambadzira | Martech Zone
Imwe yekufambira mberi kunonakidza mukushambadzira otomatiki gore rino, mumaonero angu, kwave kuri kufambira mberi kwesarudzo dzinodhura dzekushambadzira ecommerce kushambadzira. Chinyakare kushambadzira otomatiki mapuratifomu anofanirwa kuve akabatanidzwa uyezve mushandirapamwe wega wega unovandudzwa nekufamba kwenguva - iko kuiswa kunogona kutora vhiki kana mwedzi usati watanga kuona mari.
Zvino, aya mapuratifomu matsva haangogadziri kusangana, ane mishandirapamwe yakagadzirira kuvhura nekukurumidza paunenge wavagonesa. Omnisend ndeimwe yemapuratifomu - ane akawanda-chiteshi macampaign akagadzirira kuenda:
Welcome Series - Gamuchira vanyoreri vako vatsva uye uvashandure kuva vatengi vane vakagadzirira-vakagadzirwa seti eemaimeri maemail.
Chigadzirwa Kurega - Svikira kune vatengi vakaona zvigadzirwa asi vakasiya chitoro chako chepamhepo vasina kutenga.
Ngoro Kusiya - Tora zvakare ngoro dzakasiiwa nekushandisa pre-yakavakwa akateedzana nema automated email & mameseji eSMS.
Mutemo Wechiratidzo - Tumira odhi yekusimbisa SMS kana email ine risiti rekutenga kune vatengi vako vachangotenga.
Kutumira Chivimbiso - Ipa vatengi vako kunyemwerera nekuvaita kuti vazive odha yavo iri munzira.
Muchinjikwa-Tengesa - Tyaira zvimwe zvekutengesa uchikurudzira zvimwe zvinokurudzirwa zvigadzirwa zvichibva pane ako vatengi maodha apfuura.
Iyo chikuva haimire ipapo, Omnisend inosanganisirawo zvese zvaunoda kusanganisa yechitatu-bato dhata, gadzirisa, chikamu, bvunzo mushandirapamwe, gonesa kutengesa kwako, uye taura nezvekufambira mberi kwako:
Yakagadziriswa Zvemukati Mabhokisi - Wedzera uye uratidze zvimwe zvemukati zvemabhuroko mabhureki ekungosarudza zvikamu zvevateereri.
Kushandisa michina Splits -Taura yako yakakosha mvumo uye zvinokurudzira zveakawanda akasarudzika mameseji nzira mukati meimwe chete kufambiswa kwebasa.
A / B Kupatsanura Kuedzwa - Kwayedza kuti uone kuti ndeipi chiteshi, inokurudzira, kana mutsara wenyaya unokufambisa zvakanyanya kushandurwa - uye ita sarudzo dzinotungamirwa nedatha yekuvandudza mafambiro ako.
Chikamu - Chikamu chevatengi vako zvichibva pane yavo yekutenga maitiro uye zvimwe zvivakwa kuvandudza kutendeuka neakanangwa-zvakanangwa, akasarudzika maemail, uye zvinyorwa.
Chigadzirwa Kurudziro - Muchinjikwa-kutengesa nemasimba ekurudziro ezvinhu mutengi mumwe nemumwe angangotenga.
Nharembozha SMS - Wedzera maSMS uye mamwe mageru padhuze nemaemail ako uchishandisa ipuratifomu imwechete uye nekupa inoenderana, omnichannel mutengi ruzivo.
Forms - Popups, Exit Intent, Landing Mapeji, Sign-up mabhokisi, uye Wheel yeFortune mafomu ese akavakirwa mukati kunatsiridza yako anonyorera kutora.
Yakagadzirira-Yakagadzirwa Themes - Wedzera yako pachako mifananidzo uye tanga kutora uye kutumira kune vanobatika ipapo!
Yakavakwa-Mune Meseji Mishumo - Teedzera yekutengesa uye yekubata data yekukwirisa yako workflows pasina kusiya iyo Automation Edhi.
Kushandisa michina Mishumo - Kudzika-kudzika mukuita kwega kwega kwebasa rekufambisa kuenzanisa makwara akasiyana uye kuteedzera vatengi vakatendeuka.
Yepamberi Kuzivisa - Ongorora uwandu hwekufambiswa kwemabasa 'mari uye data rekuita uye ona otomatiki ako anoshanda.
kutevedzera - Unganidza ruzivo rwakadzama rwemvumo neTCPA & GDPR mafomu anoenderana.
Omnisend inoita kuti iwe ugone kuwedzera yako yechitatu bato dhata kuti uwedzere chiyero cheyako meseji mameseji. Gadzira zvigadzirwa uye nyore kuvaka tsika workflows uchishandisa zvetsika zviitiko uye iyo data kubva kune yako kuvimbika & mubairo zvirongwa, rubatsiro madhesiki, ongorora zvirongwa, zvekutakura zvekutevera masevhisi, uye nezvimwe zvese uchingoshandisa imwecheteyo Automation Edhiyo.
Nekamwe-tinya ecommerce papuratifomu yekubatanidzwa, yakanakisa 24/7 rutsigiro, uye yakazara data data-unogona switch & tora yako yekutanga otomatiki inomhanya mukati maminetsi makumi matatu chete. Ecommerce kusangana kunosanganisira 29 Inotevera, BigCommerce, Magento, Opencart, Prestashop Shopify & Shopify Uyezve, Volusion, uye WooCommerce.
Kumbira Demo kana Kutanga Yemahara Muedzo weOnnisend
Kuzivisa: Ndiri kushandisa zvikwata zvangu zvakabatana zve Omnisend uye ecommerce mapuratifomu mune ichi chinyorwa.
Tags: 29 TevereBigCommercengoro kusiiwangoro yekusiya maemailngoro kusiiwa nharembozhangoro kusiiwa smsecommerceecommerce kuyambuka-kutengesa emailecommerce kushambadzira otomatikiecommerce kushambadzira nhareecommerce smsMagentomarketing automationopencartodha yekusimbisa maemailPrestashopchigadzirwa kusiyira emailkutumira tsamba yekusimbisaShopify & Shopify Uyezvekusiya ngoro yekutengesavolutiontinogamuchira akateedzana emailwoocommerce